မွေးလမ်းကြောင်း (Vagina) ကျန်းမာရေးအတွက် အကောင်းဆုံး အစားအသောက်များ။ - Hello Sayarwon
မွေးလမ်းကြောင်း (Vagina) ကျန်းမာရေးအတွက် အကောင်းဆုံး အစားအသောက်များ။
Arkar Hein မှ ရေးသားသည်။7ရက် အကြာက တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
လိင်အင်္ဂါတွေဟာ လူသားတွေရဲ့ အရေးကြီးဆုံး အင်္ဂါတွေထဲက တစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ လိင်အင်္ဂါတွေဟာ ဆီးလမ်းကြောင်းနဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပူးတွဲလုပ်ဆောင်နေတဲ့ အင်္ဂါတွေ ဖြစ်တာကြောင့် ဒီအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေ ကျန်းမာနေဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။
တစ်ခါတရံမှာ အမျိုးသမီးမွေးလမ်းကြောင်းမှ အနံအသက် ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပုံမှန် မဟုတ်တဲ့ အမျိုးသမီး အင်္ဂါမှ သွေးဆင်းခြင်းတို့ကို ကြုံနေရပြီဆိုရင် ဒါဟာ မွေးလမ်းကြောင်းရဲ့ pH ဟာ မညီမမျှ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ pH ဆိုတာ အရာဝတ္ထုတစ်ခု ဘယ်လောက် အက်ဆစ်ဓါတ်များသလဲ၊ ဘယ်လောက်အယ်ကာလီဓါတ်များသလဲဆိုတာကို တိုင်းတာပေးတဲ့ အတိုင်းအတာ တစ်ပါ။ ဒီအတိုင်းအတာမှာဆိုရင် ၀ ကနေ ၁၄ အထိရှိပြီး ၇ အောက်နည်းတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကို အက်ဆစ်ဓါတ်များတယ်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ ၇ ထက်များတဲ့ အရာတွေကိုတော့ အယ်ကာလီဓါတ်များတယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ မွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခု အက်ဆစ်ဓါတ်များနေသလား၊ အယ်ကာလီဓါတ် (ဘေစ့်ဓါတ်ဆား) များနေသလား ဆိုတဲ့ အချက်က မွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခု ကျန်းမာရေးကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။ မွေးလမ်းကြောင်းရဲ့ pH ဟာ အနည်းဆုံး ၃.၈ ကနေ ၄.၅ အတွင်း ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မွေးလမ်းကြောင့်ရဲ့ pH ပမာဏဟာ အသက်အရွယ် အလိုက် အနည်းငယ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ အသက် ၁၅ နှစ်ကနေ ၄၉ နှစ်အတွင်းမှာ မွေးလမ်းကြောင်းရဲ့ pH ဟာ ၄.၅ နဲ့ အောက်သာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သွေးဆုံးချိန်မတိုင်မှီနဲ့ သွေးဆုံးအပြီးမှာတော့ pH ပမာဏဟာ ၄.၅ ထက် အနည်းငယ်ကျော်သွားတတ်ပါတယ်။ မွေးလမ်းကြောင်း (Vagina) ရဲ့ pH ဟာ ၇ ထက်ထက်နည်းနေတာကြောင့် အက်ဆစ်ဓါတ်ကဲနေတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ အက်ဆစ်ဓါတ်ကဲနေတဲ့ မွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဟာ ဘတ်တီးရီးယားတွေနဲ့ မှိုတွေ မွေးလမ်းကြောင်းထဲ ဝင်မလာနိုင်အောင် အကာအကွယ်တစ်ခု အဖြစ် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မွေးလမ်းကြောင်းရဲ့ pH ပမာဏာဟာ ၄.၅ ထက်ကျော်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေ ဝင်လာနိုင်ပြီး Bacterial vaginosis (BV) လို့ခေါ်တဲ့ မွေးလမ်းကြောင်းမှ ငါးညှီနံ့နဲ့ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ သွေးဆင်းခြင်းတွေ နေရထိုင်ရ ခက်ခဲတာတွေနဲ့ UTI (Urinary tract infection) လို့ခေါ်တဲ့ ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါ တွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုပြောလိုက်လို့ မွေးလမ်းကြောင်းရဲ့ pH ပမာဏ ကို နေ့တိုင်း တိုင်းတာနေရမယ်ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အမျိုးသမီး အင်္ဂါတွေဟာ သူ့ဘာသာ သန့်ရှင်း၊ ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အင်္ဂါ တစ်ခု ဖြစ်လို့ပါ။ သင့်တင့်တဲ့ မွေးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ရှိမယ်၊
ဘေးအန္တရာယ်ကင်းတဲ့ လိင်ကိုသာ ဆက်ဆံမယ်၊ သားဖွားမီးယပ်ဆိုင်ရာ ပုံမှန် စစ်ဆေးမှု လုပ်နေမယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ pH ပမာဏက ပုံမှန်အခြေအနေမှာပဲ ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခု ကျွန်တော် ဒီ ဆောင်းပါးထဲမှာတော့ Hello Sayarwon ပရိတ်သတ်တွေအတွက် မွေးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအတွက် စားသုံးသင့်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို ဖော်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ သန္ဓေအောင်နိုင်စွမ်း အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ကန်စွန်းဥ။
မြေအောက်မှာ ကြီးထွားတဲ့ ဥတစ်မျိုး ဖြစ်တဲ့ ကန်ဇွန်းဥဟာ Ipomoea batatas လို့ခေါ်တဲ့ အပင်ရဲ့ အမြစ်မှ ကြီးထွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကန်စွန်းဥမှာ ဘီတာကာရိုတင်း (Beta carotene) လို့ခေါ်တဲ့ရောင်ခြယ်ပစ္စည်း Anti-Oxidant ကြွယ်ဝပြီး သွေးများမှ ဗီတာမင် A ပမာဏ ကို သိသိသာသာမြင့်တက်စေနိုင်ပါတယ်။ ကန်စွန်းဥတွေဟာ အာဟာရဓါတ် လွန်စွာကြွယ်ဝပြီးအမျှင်ဓါတ် ကြွယ်ဝတဲ့ မြေအောက်ဥတစ်မျိုးပါ။ ဒါ့အပြင် ဒီကန်စွန်းဥတွေရဲ့ တစ်ခြားသော ကောင်းကျိုးတစ်ခုကတော့ သန္ဓေအောင်ခြင်းကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်စွမ်းပါ။ ဘီတာကာရိုတင်း (Beta carotene) နဲ့ ဗီတာမင် A ပါဝင်တဲ့ အတွက် ကန်စွန်းဥတွေဟာ မွေးလမ်းကြောင်းနံရံတွေနဲ့ သားအိမ်နံရံတွေကို သန်မာကြီးထွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဘီတာကာရိုတင်း (Beta carotene) နဲ့ ဗီတာမင် A တို့ဟာ အမျိုးသားတွေနဲ့ အမျိုးသားတွေရဲ့ မျိုးပွားနိုင်စွမ်းနဲ့ သန္ဓေသားရဲ့ ကျန်းမာရေးအပေါ် တိုက်ရိုက် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကန်စွန်းဥထဲက အာဟာရဓါတ်တွေဟာ လိင်ဟော်မုန်းတွေထုတ်လုပ်ရာမှာလည်း ကူညီပေးနိုင်ပြီး Polycystic ovary syndrome (PCOS) ဝေဒနာလို့ခေါ်တဲ့ ဟော်မုန်း မူမမှန်တဲ့ ဝေဒနာကို ခံစားနေရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ စားသုံးသင့်တဲ့အစားအစာတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ မွေးလမ်းကြောင်းကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ဘက်တီးရီးယား ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာ။
အချဉ်ဖောက်ထားတဲ့ ကိုရီးယား အစားအစာဖြစ်တဲ့ kimchiတွေ၊ ဒိန်ချဉ်ေတွ၊ ဒိန်ခဲတွေနဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ Probiotics ဘက်တီးရီးယားတွေဟာ pH ပမာဏကို ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီ ဘက်တီးရီးယားတွေဟာ ကူးစက်ရောဂါတွေကို တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်ပြီး မှိုကူးစက်ရောဂါတွေမှလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါအပြင် ဒိန်ချဉ်တွေမှာ ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်တဲ့ ကယ်လ်ဆီယမ် ဓါတ်ဟာ Premenstrual syndrome (PMS) လို့ခေါ်တဲ့ ဓမ္မတာ မလာမှီ ဖြစ်တတ်တဲ့ ဝေဒနာတွေကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
၃။ သွေးလှည့်ပတ်မှုနဲ့ လိင်စိတ်ဆန္ဒ တက်ကြွစေဖို့ အတွက် omega-3 fatty acids။
omega-3 fatty acids တွေကို သစ်ကြားသီး၊ ဗီသွာလျှော် စေ့နဲ့ ဗီသွာလျှော်စေ့ဆီတွေနဲ့ ပဲပုတ်ပဲ ဆီတွေမှာ တွေ့ရှိနိုင်တဲ့အပြင် ငါးပါးနီ၊ ငါးသလောက်၊ မက်ကရယ်ငါး၊ ဆယ်လ်မွန်ငါး၊ ငါးသေတ္တာငါး စတာဂျင်လို့ခေါ်တဲ့ ဧရာမ ငါးကြီးမျိုး၊ ထရောက်ငါး၊ တူနာငါး (ငါးမည်းလုံး) တို့မှာလည်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။ omega-3 fatty acids တွေဟာ သွေးလှည့်ပတ်စီးဆင်းမှု ကောင်းမွန်စေတဲ့အတွက် လိင်စိတ်ဆန္ဒကိုလည်း တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ omega-3 fatty acids တွေဟာ သွေးဆုံးချိန်အပြီး အမျိုးသမီးတွေမှာလည်း မွေးလမ်းကြောင်း ခြောက်သွေ့ခြင်းကို လျှော့ပါးစေနိုင်ပြီး ဓမ္မတာ လာချိန် နာကျင်ခြင်းကိုလည်း သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
၄။ ကိုယ်လက်နှီးနှောရာတွင် စိတ်လှုပ်ရှားမှု အတက်ကြွဆုံး ရောက်ရှိတဲ့အချိန်ရောက်အောင် ကူညီပေးနိုင်တဲ့ ပန်းသီး။
ဝေးလ် နိုင်ငံရဲ့ စကားပုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ “An appleaday keeps the doctor away” ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ပန်းသီးစားသုံးခြင်းဟာ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အပြင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်း ကောင်းကျိုး ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကလေ့လာချက်အရတော့ တစ်နေ့ကို ပန်းသီးတစ်လုံး ခန့်စားသုံးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ပိုမို သာယာတဲ့ လိင်မှုဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပန်းသီးထဲမှာပါဝင်တဲ့ phytoestrogen phloridzin ဆိုတဲ့ ဓါတု ဓါတ်ပေါင်းတစ်မျိုးဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှု ပိုကောင်းလာစေခြင်း၊ လိင်စိတ်နိုးကြွနိုင်ခြင်း၊ မွေးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ချောဆီများထွက်စေနိုင်ခြင်းအပြင် လိင်ဆက်ဆံရာတွင် အထွတ်အထိပ်ရောက်စေနိုင်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်တယ် လို့ဆိုပါတယ်။
၅။ အက်စထရိုဂျင် ဟော်မုန်းကျဆင်းစေခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ ပဲပုတ်ပဲ။
ပဲပုတ်ပဲတွေမှာ phytoestrogens လို့ခေါ်တဲ့ ခန္ဓါကိုယ်က အက်စထရိုဂျင် ဟော်မုန်းနဲ့ ဆင်တဲ့ ဟော်မုန်းပါဝင်ပါတယ်။ phytoestrogens ထဲမှာလည်း အမျိုးမျိုးရှိပြီး ပဲပုတ်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့
အက်စထရိုဂျင်ကိုတော့ isoflavones လို့ခေါ်ပါတယ်။ Phytoestrogens ဟာ ခန္ဓါကိုယ်တွင်းမှာ အက်စထရိုဂျင် ဟော်မုန်း ပမာဏများလာခြင်းရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို တားဆီးပေးပြီး အက်စထရိုဂျင်နဲ့ ပရိုဂျက်စတီရုန်း (progesterone) ဟော်မုန်း ပမာဏ မညီမျှခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ phytoestrogens တွေရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးက ဘာလဲဆိုတော့ ခန္ဓါကိုယ်က ထုတ်လုပ်တဲ့ အက်စထရိုဂျင် ပမာဏ နည်းပါးနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ မွေးလမ်းကြောင်းကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်စေနိုင်စွမ်းပါ။ ခန္ဓါကိုယ်မှာ အက်စထရိုဂျင် ပမာဏဟာ ဆေးဝါးတွေနဲ့ သွေးဆုံးခြင်းကြောင့် ကျဆင်းနိုင်တာကြောင့် phytoestrogens က ဒီအချိန်မှာ ဖြစ်လာမယ့် အကျိုးဆက်တွေကို တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပဲပုတ်ကရတဲ့ phytoestrogens တွေ စားသုံးခြင်းဖြင့် သွေးဆုံးပြီး အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အရေပြားဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးနဲ့ သွေးကြောဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးတွေကို ကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။
လူအများစု ကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ ထောပတ်သီးဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် သင့်တော်တဲ့ အဆီများ၊ ဗီတာမင် B-6 နဲ့ ပိုတက်ဆီယမ်တို့ ပါဝင်တဲ့အတွင် လိင်စိတ်ဆန္ဒအတွက် ကောင်းကျိုး ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ထောပတ်သီးဟာ အမျိုးသမီး မွေးလမ်းကြောင့် ချောဆီနဲ့ အီစထရိုဂျင် ပမာဏကို မြင့်တက်စေနိုင်ပြီး မွေးလမ်းကြောင်း နံရံတွေကိုလည်း သန်မာစေပါတယ်။
၇။ မွေးလမ်းကြောင်း ခြောက်သွေ့ခြင်း( vaginal dryness) ကို တားဆီးပေးနိုင်တဲ့ အရွက်များ။
ကိုက်လန်၊ ဂေါ်ဖီတွေနဲ့ မုန်လာဖြူတို့ဟာ ခန္ဓါကိုယ် ကျန်းမာရေး အတွက် ကောင်းမွန်စေတဲ့ အပြင် မွေးလမ်းကြောင်း ကျန်းမာရေးကိုလည်း ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ဒီလို အနက်ရောင်နဲ့ အစိမ်းရောင် အရွက်တွေဟာ သွေးပမာဏကို သန့်စင်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် အစားအစာမှာပါဝင်တဲ့ နိုက်ထရိတ်ဓါတ်ဆား (nitrates) တွေကြောင့် သွေးလှည့်ပတ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ဒီအရွက်တွေမှာ ဗီတာမင် E ၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်နဲ့ ကယ်လ်ဆီယမ် ဓါတ်တို့ ပါဝင်တဲ့အတွက် မွေးလမ်းကြောင်း ကြွက်သား ကျန်းမာရေး အတွက်ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီအရွက်တွေဟာ မွေးလမ်းကြောင်း ခြောက်သွေ့ခြင်းနဲ့ လိင်စိတ်ကိုလည်း ပိုမို တက်ကြွစေနိုင်ပါတယ်။
Accessed (23. June. 2018)
မိန်းမကိုယ်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း အပြီး မိမိကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ခြင်း